1 နှင့်2ရာဇဝင်တစ်ခုနိဒါန်း
1 နှင့်2ရာဇဝင်ဖို့နိဒါန်း
ကမျြးစာ၏ 13 နှင့် 14 စာအုပ်များများအတွက် Key ကိုအချက်အလက်နဲ့ဗိုလ်မှူး Themes
ရှေးဟောင်းကမ်ဘာပျေါတှငျအလွန်များစွာသောစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရှိခဲ့သည်မပြုရပါ။ ဒါကငါခေါ်ခံရဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး, ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်၏အပိုင်းတစ်ခုခွင့်ပြုဘို့စဉ်းစားနိုင်မှသာအကြောင်းပြချက်ရဲ့ "ရာဇဝငျခြု။ "
ငါဆိုလိုတာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာအခြားစာအုပ်တွေအတော်များများမှတ်မိလွယ်တဲ့, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-ဖမ်းဆုပ်အမည်များရှိသည်။ "ကိုကြည့်ပါ 1 နဲ့2ရာဇဝင် ဥပမာ" ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤရက်ကုန်စုံဈေးကွက်ထဲမှာမဂ္ဂဇင်းထိန်သိမ်းအပေါ်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်မျိုးပါပဲ။
လူတိုင်းတော်ဝင်ချစ်သောသူ! သို့မဟုတ်စဉ်းစား " တမန်တော်များ၏တမန်တော်ဝတ္ထု ။ " တချို့ပေါ့ပ်နှင့်အတူနာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ "ဗြာ" နှင့် "အဘို့အမှန် ကမ်ဘာဦးက လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်သည်းထိတ်ရင်ဖိုမြွက်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးစကားများ -" ။
သို့သော် "ရာဇဝငျခြု"? ထိုအပိုဆိုး: "1 ရာဇဝင်ချုပ်" နှင့် "2 ရာဇဝင်"? စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဘယ်မှာရှိသနည်း အဆိုပါ pizzazz ဘယ်မှာလဲ?
ကျနော်တို့ကပျင်းစရာနာမကိုအမှီအတိတ်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်, 1 နှင့်2ရာဇဝင်များ၏စာအုပ်များကိုအရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေ themes များ၏စည်းစိမ်ကိုမဆံ့။ ဒီတော့ကဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောကျမ်းတစ်ဦးအကျဉ်းနိဒါန်းနှင့်အတူခုန်ကြကုန်အံ့။
ကျနော်တို့ 1 နှင့်2ရာဇဝင်ရေးသားခဲ့သည်သူကိုအတိအကျသေချာမသိကြပေမယ့်အများအပြားပညာရှင်များရေးသားသူယဇ်ပုရောဟိတ်ဧဇရခဲ့တယ်ယုံကြည် - အတူတူပင်ဧဇရဧဇ၏စာအုပ်ရေးသားခြင်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြု။ တကယ်တော့, 1 နှင့်2ရာဇဝင်လည်းဧဇရနှင့်နေဟမိပါဝင်သည်တစ်လေးစာအုပ်စီးရီးထဲကအများစုဟာဖွယ်ရှိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအမြင်ဂျူးနှင့်ခရစ်ယာန်နှစ်ဦးစလုံးအစဉ်အလာနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဂျေရုဆလင်ပတ်ပတ်လည်မြို့ရိုးအပြန်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုထောက်ခံသောသူ - သူကဖွယ်ရှိနေဟမိ၏ခေတ်ပြိုင်ခဲ့ဆိုလိုတာကဗာဗုလုန်မြို့အတွက်သူတို့ရဲ့ပြည်ပရောက်ထံမှယုဒပြန်လာပြီးနောက်ယေရုရှလင်မြို့၌ operated ရာဇဝငျခြုဒစာရေးသူက။
400 ဘီစီ - ထို့ကြောင့် 1 နှင့်2ရာဇဝင်ဖွယ်ရှိ 430 ဝန်းကျင်ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသတည်း
တဦးတည်းသမိုင်းဆိုင်ရာအကောင့် - တွေအကြောင်း 1 နှင့်2ရာဇဝင်ကိုသတိပြုပါရန် trivia တစ်ခုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းအစသူတို့မူလကတဦးတည်းစာအုပ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းစာစောင်ကိုအပေါ် fit မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကောင့်ကိုဖြစ်နိုင်နှစ်ခုစာအုပ်တွေသို့ခွဲခြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်2ရာဇဝင်၏နောက်ဆုံးအနည်းငယ်ကျမ်းပိုဒ်ဧဇအမှန်ပင်ရာဇဝငျခြု၏ရေးသားသူခဲ့ကြောင်းအခြားညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည့်ဧဇ၏စာအုပ်ကနေပထမဦးဆုံးကျမ်းပိုဒ် mirror ။
ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းယုဒလူတို့ပြည်ပရောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအောက်ပါ၎င်းတို့၏အိမ်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်, ဤစာအုပ်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဂျေရုဆလင်များကသိမ်းပိုက်ခဲ့ ဗုခဒ်နေဇာ နှင့်ယုဒအမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အတောက်ပစိတ်များစွာကိုဗာဗုလုန်မြို့သို့ယူသှားခဲ့သညျ။ ဗာဗုလုန်မြို့သားတို့သည်မေဒိလူအားဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြပြီးနောက်, ယုဒလူတို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေသို့ပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီဂျူးလူမျိုးအဘို့တစ် bittersweet အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကပြန်ယေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကိုလည်း, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမြို့သူမြို့သားများဆင်းရဲသားတို့ကိုအခြေအနေနှင့်လုံခြုံရေးသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးမရှိခြင်းမြည်တမ်း။ ပိုပြီးင်ဘယ်အရာကိုယေရုရှလင်မြို့နိုင်ငံသားများတစ်ဦးကလူအဖြစ်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
1 နှင့်2ရာဇဝင်အပါအဝင်အများအပြားလူသိများတဲ့သမ္မာကျမ်းစာပါဇာတ်ကောင်များ၏ပုံပြင်များ, ပြောပြ သည်ဒါဝိဒ် , ရှောလုသည် , ရှမွေလသည် , ရှောလမုန်သည် ဒါပေါ်နှင့်။ ယာကုပ်အားအာဒံမှစံချိန်တင်, ဒါဝိဒ်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်များစာရင်းကိုအပါအဝင် - အဆိုပါစတင်အခန်းကြီးပေါင်းများစွာဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်းပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားခေတ်သစ်စာဖတ်သူများမှအနည်းငယ်ပျင်းစရာကောင်းခံစားရနိုင်ပါသည်, သို့သော်သူတို့အရေးပါသောအနဲ့သူတို့ရဲ့ဂျူးအမွေအနှစ်နှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားနေသည်ထိုနေ့အတွက်ဂျေရုဆလင်လူအတည်ပြုကြပြီ။
1 နှင့်2ရာဇဝင်များ၏စာရေးသူလည်းဘုရားသခငျသညျသမိုငျး၏ထိန်းချုပ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့အကြီးအရှည်မှ သွား. , ပင်ယေရုရှလင်မြို့အပြင်ဘက်ကိုအခြားလူမျိုးတို့နှင့်ခေါင်းဆောင်များ၏။ တနည်းအားဖြင့်စာအုပ်တွေဘုရားသခငျသညျအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကြောင်းပြသနေတဲ့အချက်ပါစေ။ (1 ရာဇဝင်ချုပ် 10 ကိုကြည့်ပါ: 13-14, ဥပမာ။ )
အဆိုပါရာဇဝငျခြုလည်းဒါဝိဒ်၏အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့ပိုပြီးတိတိကျကျဒါဝိဒ်နှင့်ညျဘုရားသခငျ၏ပဋိညာဉ်တရားကိုအလေးပေးနှင့်။ ဤပဋိညာဉ်သည်မူလက 1 ရာဇဝင်ချုပ် 17 မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်း, ဘုရားသခင်၏2ရာဇဝင်7ဒါဝိဒ်၏သားရှောလမုန်, အတူကအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်: 11-22 ။ ယရှေုအဖြစ်ယနေ့သိသောအဘယ်သူကို - ပဋိညာဉ်တရားကိုနောက်ကွယ်မှအဓိကစိတ်ကူးဘုရားသခငျသညျမွကွေီးပျေါမှာများနှင့်သည်ဒါဝိဒ်၏အနွယ်မေရှိယကိုပါဝင်သည်မယ်လို့သူ့အိမ်သူအိမ်သား (သို့မဟုတ်သူ၏အမည်) တည်ထောင်ရန်ညျဒါဝိဒျကိုရှေးခယျြခဲ့ကွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 1 နှင့်2ရာဇဝင်ဘုရားသခင်နှင့်သင့်လျော်စွာကိုယ်တော်ကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်၏သန့်ရှင်းသောတန်ဆာကိုအလေးပေး။
ဒါဝိဒ်သည်ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုယေရုရှလင်မြို့နှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်၏အခမ်းအနားအတွက်စွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရန်သူ၏စွမ်းရည်သို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်အဖြစ်သညျဘုရားသခငျ၏ပညတျကိုနာခံဖို့ ယူ. စောင့်ရှောက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုကြည့်ဖို့, ဥပမာ, 1 ရာဇဝငျခြု 15 မှာကြည့်ပါ။
အားလုံးအားလုံးအတွက်, 1 နှင့်2ရာဇဝင်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ဘုရားသခင်၏လူမျိုးရဲ့ဂျူးဝိသေသလက္ခဏာနားလည်အဖြစ်ဟောငျး-ဓမ္မသမိုင်း၏ကြီးမားသောအတုံးပို့ဆောင်ကူညီပေးသည်။
အဆိုပါညှိုးနွမ်းသင်္ဘောသဖန်းပင် (: 20-26, Mark 11) ယေရှုရဲ့သင်ခန်းစာ
မောရှေနှင့်ပညတ်တော်ဆယ်ပါး - ကျမ်းစာပုံပြင်အကျဉ်းချုပ်
ယရှေုသညျမွို့ (22-26 မာကု 8) တွင်တစ်ဦးမျက်မမြင်က Man အနာပျောက်
အဘိဂဲလနှင့်ဒါဝိဒ် - အဘိဂဲလဘုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပညာအရှိဆုံးဇနီးခဲ့
ကမျြးစာအားသုံးသပ်ခြင်း: မဟာပညတျတှငျယရှေု (မာကု 12း28-34)
ထိပ်တန်း 10 ဂီတတူရိယာ Beginners များအတွက်
သင့်ရဲ့ Spark plug ကိုအစားထိုးဖို့
သင်က Kwanzaa အကြောင်းသိထားသင့်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာကျင်းပပြီးစီးရဲ့အဘယျသို့
ပင်မအုပ်စု Element တွေကိုအဓိပ္ပာယ်
ဤနေရာသို့သွားရန်ဒါကအဲဒီ Tiny, Black ကချို့ယွင်းမှုများဘာတွေလဲ?
ဒါဟာအားလုံး Hang Out တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နေဒါက 20 ဆိုးသစ်ပင်များ
ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာစပိန်ကြိယာ '' Encantar '' အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါ Balfour ကြေညာစာတမ်း၏သမိုင်း
ဂန္ထဝင်ကားအဘယ်သူမျှမ Crank အဘယ်သူမျှမ Start ကို
အဆိုပါ Etruscan ဘယ်သူကသလော
မက္ကဆီကန်အမေရိကန်စစ်ပွဲ: Resaca de la Palma ၏တိုက်ပွဲ
ယုံကြည်မှု Interval ပြီးတော့ယုံကြည်မှု Levels
တစ်ဦးက New Moon ထုံးတမ်း Perform လုပ်နည်း